Unicef Oo Xafiiskeedii Nayrobi U Soo Rartay Muqdisho iyo Hay’adaha Kale Oo Sheegay Inaanay Haysan Cid Ammaankooda Damaanad Qaada | Berberatoday.com
Unicef Oo Xafiiskeedii Nayrobi U Soo Rartay Muqdisho iyo Hay’adaha Kale Oo Sheegay Inaanay Haysan Cid Ammaankooda Damaanad Qaada
September 28, 2018 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Hay’adda Qaramada Midoobay ee UNICEF, ayaa noqotay hay’adii u horaysay ee fulisay amar cago-juglayn ah oo ay dawladda Soomaaliya u dirtay hay’adaha uu fadhigoodu yahay Nayrobi, Kenya oo ay ka dalbatay inay xarumahooda u raraan magaalada Muqdisho ee Soomaaliya.
Wasiirka qorshaynta Soomaaliya Jamaal Xasan, ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay twitterka, wuxuu ku sheegay inuu ka qayb galay munaasibad loo sameeyay xafiiska UNICEF ee Muqdisho, wuxuuna sheegay inuu hay’adaha kalena ka rajaynayo sida UNICEF oo kale.
Wasiirkan ayaa bishii August sheegay inuu diiwaangelinta kala noqonayo hay’adaha fadhigoodu yahay Nayrobi haddii aanay u soo guurin Muqdisho.
Hay’adaha Qaramada Midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Nayrobi, ayaa ku doodaya inaanay Muqdisho ku haysan cid damaanad qaada ammaankooda islamarkaana aanay haysan kharash ay ku bixiyaan ammaanka cidda ku ilaalinaysa Muqdisho. Waxaana hore u jiray in hay’ado Qaramada Midoobay ahi ay xafiisyo ku leeyihiin Muqdisho sida UNPD, UNHCR iyo kuwa kale, laakiin waxa ay dhex degenyihiin xarunta Xalane ee ay AMISOM ilaaliso.
Iyadoo ay dawladda Soomaaliya ku doodayso inay kafaalo qaadayso ammaanka hay’adahan, haddana waxa bishii May xarunta ICRC ee Muqdisho laga afduubay Sonja Nientiet oo u dhalatay dalka Jarmalka oo ah kalkaaliye caafimaad, ilaa haddana lama garanayo halka lagu hayo iyo meesha lala tagay, waxaana gabadhan laga afduubay badhtamaha magaalada Muqdisho.